Raila Odinga: “Saraakiil ayaa Alshabaab ka taageera shixnadaha sonkorta ee laga soo daabulo Somalia” – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Raila Odinga: “Saraakiil ayaa Alshabaab ka taageera shixnadaha sonkorta ee laga soo daabulo Somalia”
Raila Odinga ayaa ugu baaqay Madaxweyne Uhuru Kenyatta in la soo horumariyo Doorashadda Guud ee lagu waday in la qabto sannadka 2017-ka.
Waxa uu tilmamaay inay Dowladda ku fashilantay inay wax ka qabtaan Ammaanka iyo Musuqa hareeyey Nidaamka Dowladnimadda.
“Siyaasiyiin iyo Saraakiil sare oo ka tirsan Sirdoonka iyo Hay’addaha Ammaanka Kenya ayaa oggolaaday dhoofinta dhuxusha iyo sonkorta” ayuu ku yiri Raila Odinga qoraal uu bishan 25-dii ku soo diray E-mail.
Waxa uu intaasi ku daray in loo baahan yahay inuu Madaxweyne Uhuru Kenyatta si xooggan u qaato arrintaasi, isla markaana uu ku dhawaaqo in la qabto doorasho cusub, iyo in dalka Kenya laga badbaadiyo burburka.
Hoggaamiyaha Isbahaysiga CORD, Raila Odinga waxa uu tilmaamay inay Saraakiil aan la magacaabin inay Alshabaab taageero ka siiyaan Sonkorta sida qarsoodiga loogu soo gudbiyo gudaha dalka Kenya.
Odinga waxa uu saddex jeer ku guul-daraystay inuu Madaxweyne ka nodo dalkaasi waxa kaloo uu ku eedeeyey Saraakiishaasi inay taageeraan ganacsiga dhuxusha ee sida sharci-darradda uga socota Deegaanadda ay Ciiddanka Kenya kaga sugan yihiin gudaha dalka Somalia.
Dhinaca kale, Afhayeenka Madaxweynaha Kenya oo lagu magacaabo Manaoh Espisu ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo Eedeymaha uu Rails Odinga soo jeediyey.
Bilowgii bishan, Madaxweynaha Kenya waxa uu xilkii ka qaaday shan Wasiir oo lagu soo eedeeyey musuq iyo xil-gudasho la’aan.
Dhageyso: Warka Duhur ee Radio Dalsan 27-04-2015